कुलमान कै कारण आ’फ्नो मान्छे नियुक्त गर्न गार्‍हो भएको नै हो भने कु’लमान घि’सीङलाई देश निकाला गरौं । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कुलमान कै कारण आ’फ्नो मान्छे नियुक्त गर्न गार्‍हो भएको नै हो भने कु’लमान घि’सीङलाई देश निकाला गरौं ।
एक समय देशमै बसेर यहाँको शिक्षाको बिकासमा योगदान गर्छु भनेर डा श्रीरामभक्त माथेमा कम्बोडियाबाट नेपाल आउनुभयो । केही बर्ष काठमाडौमा बसेर केही शैक्षिक संस्थामा काम पनि गर्नुभयो,अन्तत: केही बर्ष अघि उहाँको चित्तदुख्दो अनि नि’राशाजनक अभिव्यक्ति आयो -” म हारेँ,काम गर्ने कुनै सकारात्मक बाताबरण भएन । म त्यसैले गह्रौ मन लिएर कम्बोडिया फर्कँदैछु ।”
तिनै घिसिङ कार्य’कारी प्रमुख भएसी भाद्रमा दैनिक ७ घण्टाको लोडसेडिङ तिहारको दिपावलीको दिन समेत देशमा लोडसेडिङ भएन । यो घटनाले पनि हामी कति प्रतिभा पारखी रहेछौं भ’न्ने देखाउँछ ।
अहिले गोबिन्द केसी जुम्लामा अनसन बसेका छन् । ती फकिरलाई कसले उचालिदियो र बिगतमा सानो कुरा हुनासाथ पलेटी कसिहाल्थे त्यसको समीक्षा पछि गरौँला तर उनका केही बि’सय त पु’ष्टि भएका छन् नि । स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाको हातमा गयो भने जनताले दुख पाउँछन् भन्ने उनको बुझाइ त अहिले फैलिएर सरकार नै माफियाको हातमा गएको हैन र?
जुम्लाजस्तो ठाउँमा कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने र त्यसलाई सुबिधासम्पन्न बनाउने उहाँको मागमा सरकारलाई किन बिमती? प्रष्ट छ, मोफसलमा स्वास्थ्यका सुबिधा पुर्याउँदा शहरमा बसेर जनता मारेर नेता पोस्ने कसाहीहरुको सुसेधन्दा चौ’पट हुन्छ हो ?
कुलमा’नका बिसयमा अहिले एकपछी अर्का जलमाफिया,जनमाफिया,राजनितिक व्यापारी कम्मर कसेर लागेका छन् । यो मामि’लामा सरकारमा बस्ने कतिले निर्लज्जताको पराकाष्ठा नाघेका छन् । नेता र मन्त्री हुनु भनेको झुट बोल्ने लाइसेन्स पाउनु हो भने ठिकै छ हैन भने उर्जामन्त्रीले जनताका अघि सफेद झुट बोलेका छन् ।
मेरो जनतालाई चे’तावनी छ- कहिलेसम्म बिबेक बन्दकी राखेर राजनितिक ब्यापारीलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा जिताउँछौ हँ ? मन्त्राल’यको तर्फ’बाट कुलमानको प्रस्ताव लैजान्छु भनेर मेरै कार्यक्रममा जनता’काबिच बोलेका र प्रतिबद्धता गरेका उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले जनतालाई झुटो बोले बापत राजिना’मा दिन पर्दैन ?
कि प्रधानमन्त्रीले पुनको प्रस्ताब रोकेको हो भने जनतालाई प्रष्ट भन्नुपर्यो,हिसाब त्यतै मागौँला । कि लेनदेन नमिलेको ? कुलमा’नले गत चुनावमा चुनाब खर्च दिएनन् हो? पार्टी र नेता पाल्ने माफिया,बिचौलिया र इन्भर्टर ब्यापारीकै प्रभाबमा कानुनको अड्चन निकालेको भए यसको मूल्य महङ्गो पर्नेछ ,ढुक्क भए हुन्छ । अहिले सत्तामा बस्दा हामीलाई कस्ले के गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ ।
कुलमानलाई पुनर्नियुक्ती नगर्नुको का’रण जनतालाई बताउने हिम्मत छैन ?
कानुनले मिल्दैन भने अहिलेसम्मका कति नियुक्ती कानुनसम्मत् छन् ,सरकार स्वतन्त्र छनबिनका लागि तयार छ? मन्त्री सरहको सुबिधा दिएर प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने कानुन चाहिँ कहाँ छ?कि सल्लाहकारका भाइ, मन्त्रीका नातादार, घरमुलीका हुक्के बैठके र धन्दाता बिचौलिया नियुक्ती गर्दा कानुन चाहिँदैन?
कानुनले नमिलेको हो भने कानु’न किन नसच्याएको ? जनताले चुनाबमा लोप्पा खुवाएकालाई संविधान संसोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन कार्यदल बनाउने नेकपाले कुलमानलाई कानुनको तगारो लगाउन खोजेको छ, जनताले आउँदो चुनाबमा यस्ता दललाई गरालो लगाउनेछन् ।
कुर्सी र शक्तीले मैमत्तहरु बिबेक बन्दकी राखेर अट्टहास गर्छन् । तिनैको फर्मानले पार्टीको प्रबक्तालाई कुलमानको पक्षमा बोल्न रोक लगाइएको छ । प्रबक्ता पनि कति निरीह,बच्चाले माथीबाट बारम्बार पिसाब गर्छ,अनि उनी टाउको सु’म्सुम्याइरहने । के को लालसाले होला,त्यो दुर्गन्ध सहिरहन परेको ?
कुलमानले गल्ती नै गरेका छैनन् भन्ने होइन गरे होलान् ,तर तिमिहरुको अघि त्यो निकै कम होला । कुलमानले घोटाला गरेकै छैनन् भन्ने होइन,तर तिमिहरुले त घप्लक्कै पो गरेका छौ त । कुलमानले सबै गरे भन्ने हैन गर्न बाँकी होला या सकेनन् ,तिमिह’रुले त गर्दा पनि गरे नौ र गर्दा पनि गर्दैनौ नि ।
कुलमानले तिमिहरुलाई टेरेनन् होला,तिमिहरुले चाहिँ जनतालाई टेरेका छौ र ? अनि नियम जति जनताका नायक कुलमानले मात्र मान्न पर्ने हो र? कुलमान कसैका कुरा सुन्दैनन् निरंकुश र अधिनायक भए भन्ने लागेको भए,तिमिहरु भन्दा ठूलो अधिनायक को पो होला र ?
Previous इटहरीमा हुन थाल्यो १८ घण्टा लोडसेडिङ,के हुँदैछ?,हेर्नुहोस।
Next सरिता गिरी पुनः राजनीतिमा, तराई मधेश वृ’हत लोकतान्त्रिक अ’भियान ग’ठन,फेरि संसद बन्लिन त?